अस्ट्रेलिया घुम्न आउने अभिभावकको स्वास्थ्य बीमा गराउनु किन अनिवार्य छ ?
मेरो बुवाआमा तीन महिनाको लागि अष्ट्रेलिया आउनुभएको छ। उहाँहरू दुवैजना स्वस्थ नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूको भिषामा बीमा अनिवार्य भन्ने कुनै शर्त राखिएको पनि छैन । के उहाँहरूको बीमा नगराउँदा पनि हुँदैन ?
भिषाको शर्त नभए पनि बीमा गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ । बुबा आमा वा अन्य आफन्त यहाँँ आएर गम्भिर किसिमको बिरामी भइदिनु भयो भने तपाईंलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्न सक्छ ।
मैले व्यक्तिगत रूपमा धेरैजनालाई भेटेको छु, जसले आफन्त बिरामी पर्दा वा आफन्तको मृत्यु हुँदा मानसिक पीडा र संकटका साथसाथ ठूलो आर्थिक क्षतिको पनि सामना गर्नु परेको छ ।
बीमा गर्नाले तपाईंको बुवाआमालाई कुनै स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या आएमा आर्थिक रूपमा ठूलो संकटबाट जोगिन सक्नुहुन्छ ।